Vinten နှင့် Vizrt တို့သည် Ryder ဖလားကိုအသက်ပြန်ရှင်စေသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အသက်ရတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားယူခဲ့ Vinten နှင့် Vizrt
အသက်ရတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားယူခဲ့ Vinten နှင့် Vizrt
စိန့် Edmund, ဗြိတိန်သင်ျဂွိုဟျ - Vinten®, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Vitec Videocomတစ်ဦး Vitec Group မှကုမ္ပဏီလာမည့်တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားစဉ်အတွင်းစတူဒီယိုအတွက်အသုံးပြုရန်က Sky Sports နှင့်တစ်ဦး Vinten encoded ဒယ်အိုးနှင့် tilt ခေါင်းကိုထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Vinten Vision ၏ 250E ဟာ virtual reality (VR) အပြောင်းအလဲနဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ positional နှင့်မှန်ဘီလူး data တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ပြီးပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းတစ်ဦးကို virtual ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဂေါက်သီးနှင့်စာရင်းဇယားတခုအဖြစ်မှတင်ပြခြင်းဖြင့်စတူဒီယိုတွင်အသုံးပြုပါလိမ့်မည်ဆိုသောအကွက်တွင်ပါရှိပါတယ်။
အဆိုပါ VR ဂရပ်ဖစ်ဒြပ်စင်များကထောက်ပံ့ပေးနေပါသည် Vizrt - Real-time 3D ဂရပ်ဖစ်, စတူဒီယိုအလိုအလျောက်, အားကစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု tool များ၏ထောက်ပံ့ရေးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူ - ထို VR အပြောင်းအလဲနဲ့ box ထဲကဒေတာနှင့်အတူ 3D rendering အင်ဂျင်မှထုတ်လွှင့်။
"က Sky Sports နှင့်ပြီးသားယင်း၏ IBC ဆုရဘို့ငါတို့ virtual reality software ကို အသုံးပြု. ၎င်း၏ကျွမ်းကျင်မှုသက်သေပြလျက်ရှိသည် တနင်္လာနေ့ညဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ပရိုဂရမျ "Rex Jenkins များအတွက် MD ကပြောပါတယ် Vizrt ဗြိတိန်နိုင်ငံ။ "က Sky Sports နှင့်ယခုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် OB ဖြစ်ရပ်များအတွက်လမ်းမပေါ်တွင် VR နဲ့ AR တာကခြေလှမ်းထပ်မံသွားခြင်းဖြစ်သည်။ Vinten VR ခြေရာခံခြင်းအကြီးအကဲများအများအပြားမိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပအားကစားဖြစ်ရပ်များအတွက်အစိုင်အခဲများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ပြနှင့်အတူကောင်းစွာပေါင်းစည်းကြပါပြီ Vizrt'' s ကိုဂရပ်ဖစ်စနစ်။ "
"သူကတစ်ဦး၏လိုအပ်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးအဖြစ် Vision ၏ 250E ကို virtual ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်စံပြဖြစ်ကိုယ်တိုင်ဒယ်အိုးနှင့် tilt ၏တိကျသော Real-time ဒစ်ဂျစ်တယ်အီလက်ထရောနစ် positioning ကိုပေး optical ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဒယ်အိုးနှင့် tilt ခေါင်းကို operated," မာကု Osborn ကပြောပါတယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, EMEA နှင့်အာရှ, Vinten ၏ဒါရိုက်တာ။ "ဟုအဆိုပါ VR အပြောင်းအလဲနဲ့သေတ္တာနှင့်အတူပေါင်းလိုက်သောအခါကုဒ်ထည့်သွင်းသည့်ခေါင်းကိုမဆိုစတူဒီယိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘက်စုံသုံးနှင့် function တစ်ခု သာ. ကွီးမွတျအဆငျ့ပေးပါသည်။ "
အဆင့်မြင့်စက်ရုပ်ဒယ်အိုး / tilt / zoom ကို / အာရုံဦးခေါင်းကို အသံလွှင်း တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလား Vinten virtual reality 2014-09-25
ယခင်: ကျားရှုထောင့် "Peaky Blinders" ပေါ်တွင်ချွေနှင့်ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ရေးအောင်မြင်ရန် Aframe အသုံးပြု
နောက်တစ်ခု: ILOOK: သာလျှင်မြို့မှာရှိတဲ့အင်တာနက်ရုပ်မြင်သံကြား (OTT) ပေးသူကျော်အဆိုပါ!